Walgahiin Hawaasa Dubartoota Oromoo fi Hawaasa Dubartoota Afrikaa Biyyoota 16 Irraa Walitti Dhufan Magaalaa Guddoo Biyya Masrii Kaayiroo Keessatti Geggeeffame Milkiin Xumurame. -
Onkoloolessa 15,2015 guyyaa kaleessaa magaalaa guddoo Masrii Kaayiroo keessaa bakka Opera jedhamutti walgahiin Dubartoota Afrikaa fi Dubartoota Oromoo hirmaachise sirna miidhagaa ta’een geggeeffamaa ture milkiin xumuramuu oduun SBO dhaqqabe hubachiisee jira.
Hirmaattota irraa bakka bu’aan Hawaasa Nuubaa Sudaan Obbo Khaalidii fi Hawaasa Oromoo irraa Obbo Abdusalaam walduraa duubaan isaanis haasawa dhageessisan keessatti hariiroon ykn walitti dhufeenyi Hawaasa Afrikaa fi Hawaasa Masrii jidduu jiru cimuu akka qabu hubachiisaniiru. Walgahichis milkii gaariin akka xumurame beekuun danda’ameera.
Previous Nuu fi Isaan (Oromoo fi Koloneeffataa)
Next Sweden; Oromoo students showcasing their cultures